स्तन क्यान्सर र यसको रोकथाम « Anumodan National Daily
स्तन क्यान्सर र यसको रोकथाम
प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७४, बिहीबार ०७:३०
स्तनका कोष असामान्य तवरले शीघ्र रुपमा बृद्धि हुनुले खतराको संकेत गर्छ । धेरै मात्रामा कोषहरुको वृद्धि हुन थाल्नु र पुराना कोषहरु टाँसिएर एकै ठाउमा एकीकृत हुन थालेमा गिर्खा वा टुयुमर बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जुन पछि गएर स्तन क्यान्सरमा परिणत हुनसक्छ ।
स्तन क्यान्सर प्रायः दुध उत्पादन गर्ने नलीबाट सुरु हुन्छ तर कहिलेकाँही तन्तुहरुको झुप्पाबाट पनि प्रारम्भ हुनसक्छ । स्तन क्यान्सर जुनसुकै उमेरका महिलालाई हुने रोग हो । तथ्याङ्कले देखाए अनुसार प्रतिवर्ष विश्वमा स्तन क्यान्सरका दुई लाख नयाँ विरामी थपिने गरेको छ । जस मध्ये प्रतिवर्ष ४७ हजार यस रोगका कारण मृत्युको मुखमा पुग्ने गर्छन् ।
प्रत्येक आठमा एक अर्थात् १२.५ प्रतिशत महिलालाई जीवनकालमा एक पटक स्तन क्यान्सर हुने अनुसन्धानबाट देखिएको छ । क्यान्सरले मर्ने १५ देखि ५४ वर्षका महिलामा सबैभन्दा धेरै स्तन क्यान्सर नै हुन्छ । नेपालमा ३० देखि ५० वर्षका महिलामा स्तन क्यान्सर बढी देखिएको छ । नेपालमा कम्तिमा ५० हजार महिलालाई स्तन क्यान्सर भएको अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा शहरका शिक्षित महिलालाई समेत स्तन क्यान्सर के हो, किन र कसरी हुन्छ तथा सो रोगबाट बच्न के गर्नु पर्छ भन्ने जानकारी भएको पाइँदैन । अधिकाँश नेपाली महिला स्तनमा गिर्खाहरु आए पनि लाज तथा संकोचका कारण परीक्षण गराउन अस्पताल जाँदैनन् ।
स्तन क्यान्सर प्रायः सबै वर्ग, उमेर समूहका महिलालाई हुनसक्ने भएकाले समयमै स्तनको परीक्षण गराउनु यस रोगबाट जोगिन महत्वपूर्ण कदम हुन्छ । नियमित रुपमा आफैले आफ्नो परीक्षण गर्ने, चिकित्सकबाट परीक्षण गराउने, स्तनको गिर्खा जाँच गर्ने म्यामोग्राफी गराउने, गिर्खाभित्र ठोस वा तरल पदार्थ के छ भन्ने पत्ता लगाउन स्तनको अल्ट्रसाउन्ड गराउनु पर्छ ।
साथै, विकिरणबाट बच्ने, नियमित व्यायाम गर्ने, चिल्लोयुक्त खाना कम खाने, धुमपान तथा मध्यपान नगरेर शरीरमा रोग प्रतिरोधत्मक क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ । स्तन क्यान्सर रोकथामको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्तन क्यान्सरको विकासक्रमबारे सचेत हुनुनै हो । समयमै यसको निदान भए सफल उपचार सम्भव हुन्छ । तर, वंशाणुगत कारणलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन । तथापि सन्तुलित आहारविहार र स्वस्थ्य जीवनशैलीले क्यान्सर हुने सम्भावनालाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।
स्तन क्यान्सर हुँदा देखिने लक्षणहरु :
स्तन क्यान्सरको प्रारम्भिक अवस्थामा कुनै पनि लक्षण देखिदैन ।
क्यान्सर बढ्दै गएपछि निम्न लक्षण देखा पर्छन्ः
स्तन वा पाखुरामुनि गिर्खा हुनु, गिर्खा कडा, अनियमित तथा नदुख्ने प्रकृतिको हुनु । स्तन वा स्तनको मुन्टोको आकार–प्रकार परिवर्तन हुन्छ । जस्तै– रातोपना, चाउरिएजस्तो, सुन्तला रङको, मुन्टो स्तनतिर फर्किएको, मुन्टो वरिपरीको छालामा कत्ला निस्केको वा सुन्निएको ।
स्तनबाट दूधबाहेकको तरल पदार्थ जस्तै – रातो, सफा वा पहेलो, हरियो अथवा पिप जस्तो आउनु यसका लक्ष्णण हुन् ।
– स्तनको मुन्टो दुख्नु ।
– स्तनमा निको नहुने घाउ हुनु ।
– गम्भीर अवस्थामा हाड दुख्नु, स्तन दुख्नु, स्तनमा घाउ आउनु, पाखुरा ।
– सुन्निनु, तौल घट्नु ।
प्रायः जसो किशोरीमा महिनावारी सुरु हुनु पहिले स्तन बढ्न थाल्छ । यौवनावस्थामा प्रत्येक महिलाको स्तनमा परिवर्तन भईरहन्छ । स्तन बढ्दै जाँदा स्तनभित्र एक प्रकारको गिर्खा बनेको महशुस हुन्छ । महिनावारीको समयमा स्तन वढी संवेदनशील, सुनिने र दुख्ने गर्छ । यो सामान्य अवस्था हो । युवावस्थामा आफैले आफ्नो स्तन परीक्षण गर्ने बानी बसाल्ने हो भने पछि देखिने असामान्य परिवर्तन सहजै थाहा पाउन सकिन्छ ।
आफ्नो स्तन आफैँ परीक्षण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय महिनावारी भएको एक हप्तापछि हो । जुन समयमा स्तनहरु दुख्ने तथा ठुला हुने गर्छन् । नुहाउने समयमा वा नुहाएर ठूलो ऐना अगाडी उभिएर परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
स्तन परीक्षण गर्ने तरिकाः
१. ठूलो ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो दुबै हात कम्मरमा राखेर स्तनको आकार, रंग, सुन्निएको छ कि छैन् हेर्ने । यदि स्तन सुन्निएको, रंग परिवर्तन तथा स्तनको मुन्टा स्तन तिर नै फर्केको भएमा तुरुन्तै चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्ने ।
२. ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो देब्रे हात उठाएर दुबै स्तनको आकार, रंग, सुनिएको छ, छैन् तथा स्तनको मुन्टामा समानता छ कि छैन हेर्ने ।
३. देब्रे हातका बीचका तीनवटा औँलाको ल्याप्चे लगाउने भागले स्तनको वरिपरि गोलाकार रुपमा विस्तारै मालिस गर्दै औँला नउचालिकन टुप्पोतिर लग्ने ।
४. स्तनमा औंलाले दबाएर विभिन्न किसिमका तन्तुहरु अनुभव गर्नुहोस् । पहिले विस्तारै दबाएर छालालाई मात्र परिक्षण गर्नुहोस् अनि मध्यम दबाब दिएर बीचका तन्तु महशुस गर्ने र अन्तमा जोडले दबाब दिएर करङसम्म औँला पु-याई भित्री गिर्खा, दुखाई वा असहजता खोजी गर्ने ।
५. पुरै स्तन, छाती, पाखुरामुनि, काखी, ब्युटी बोन र काँध छाम्ने । त्यस्तै गरी एक पटक उत्तानो वा सुतेर पनि माथि उल्लेख गरिए जसरी परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
स्तन क्यान्सरको ठोस कारण पत्ता नलागे पनि निम्न कारणलाई जोखिमको रुपमा हेरिएको छ ।
– महिला, विशेष गरी प्रौढवस्था ।
– वंशाणुगत । जस्तै आमा, दिदी, बहिनी, छोरीमध्ये कुनै एकमा भएमा यो रोग भएमा ।
– १२ वर्ष पुग्नु भन्दा पहिले महिनावारी भएका र ५५ वर्षपछि रजोनिवृत्ति भएका महिला ।
– नियमित मदिरा सेवन गर्ने महिला ।
– लामो समयसम्म परिवार नियोजनका लागि हर्मोनमा आधारित चक्की वा सुई प्रयोग गरेमा ।
– रजोनिवृत्तिको प्रभाव घटाउन हर्मोनल रिप्लेसमेन्ट थेरापी गराएमा ।
– मोटो महिलामा एस्ट्रोजिन हर्मोन बढी उत्पादन हुन्छ । जसको आधिक्यता स्तन क्यान्सरको कारक मानिएको छ ।
– कहिल्यै गर्भवती नभएका वा ३० वर्षपछि बच्चा जन्माएका महिला ।
– विकिरणः बच्चा वा युवावस्थामा छातीको क्यान्सर वा अन्य रोगका लागि विकिरण उपचार गरेका महिला ।
– स्तन कोषको असामान्य वृद्धि भएमा ।
विकिरण र शल्यक्रियाबाट क्यान्सरग्रस्त भागको वरिपरि उपचार गरिन्छ भने केमोथेरापीले सम्पूर्ण शरीरमा उपचार गर्छ । प्रायः महिलामा मिश्रित उपचार प्रभावकारी हुन्छ ।
– डा. अर्जुनप्रसाद तिवारी